32ကမာရွတ်မြို့နယ် 18ကျောက်တံတားမြို့နယ် 16ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ် 31စမ်းချောင်းမြို့နယ် 14တာမွေမြို့နယ် 27တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် 3ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် 13ဒဂုံမြို့နယ် 8ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် 10ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် 2ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း 4ဒေါပုံမြို့နယ် 20ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် 7ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် 23ဗဟန်းမြို့နယ် 13ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် 9မင်္ဂလာတောင်ညွှန် မြို့နယ် 6မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် 10မရမ်းကုန်းမြို့နယ် 16မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် 9ရန်ကင်းမြို့နယ် 8ရွှေပြည်သာမြို့နယ် 29လမ်းမတော်မြို့နယ် 11လသာမြို့နယ် 1လှည်းကူးမြို့နယ် 10လှိုင်မြို့နယ် 8လှိုင်သာယာမြို့နယ် 15သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် 13သာကတမြို့နယ် 7အင်းစိန်မြို့နယ် 11အလုံမြို့နယ်
၀င်း Business Group ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးခန်း
အမှတ် 20၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း(အောက်)၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 157/A၊ 45-လမ်း(ထက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 46၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း(အောက်)၊ လသာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 184၊ 39 လမ်း (အလယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 119၊ မြေညီထပ်၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
7 Star (ဓာတ်ခွဲခန်း)
အမှတ် 429/437၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့်သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
003/25, 9th St., (B) Blk., Dagon Seikkan Township Yangon
အခန်း 001၊ ဘုရင့်နောင်တာဝါ၊ 2/A၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ 14 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
09 799 992729
98A, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon
388, 1st Flr., Right, Shwebonthar St., Upper Blk., Pabedan Township Yangon
32-A, Pyi Htaung Su Lane, Bahan Township
Aung Mingalar Clinic
N0.369 Complex Center,Corner of Laydaung Kan Road and Waizayandar Road(Near libis style hotel),Thingyankyun Township,Yangon
Bangkok Women’s Health Center
09 777 700814
46, Shwe Taung Gyar St., Shwe Taung Gyar Ward (2),
BG Blood Donation Group
အမွတ္ 839/ခ၊ ျမရည္နႏၵာလမ္း၊ 19 ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Blood Donation (MBDA) For Child
အမွတ္ 15၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
CBET (Central Bio Equipment Trading Co., Ltd.)
+ 95 9516 8386; + 95 9515 6052.
No. F-15/19, 1st floor, Pearl Centre, Corner of Saya San Street & Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar., Bahan
Central Laboratory Services Co.,Ltd.
သွ်င္ပါဂူေဆး႐ံု၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Direct Blood Donate Organization
ဓမၼိက၀တီလမ္း၊ အမွတ္ 53၊ ပထမထပ္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
DR. HTEIN LIN (ဒေါက်တာ ထိန်လင်း သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း)
************** တနဂၤေႏြေန့တိုင္း ေဆးခန္းပိတ္သည္။ **************
77, 8th St., Lower Blk., Lanmadaw Township. Yangon
Dr. Myint Shwe (Manchester Vision)
382, Shwebontha St., Upper Blk., Pabedan Township. Yangon
DR. NAY WIN (MODERN DENTAL CLINIC)
09 518 7739
72, Junction of The West Horse Race Course Rd. & Bo Sein Mhan Rd., Tamwe Township
တိုက် F/S/16၊ ရွှေစံပယ်ရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ENT (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း) ဆေးခန်း
01-240600 (ခြဲ - 4497)
သိမ်ကြီးဈေး D ရုံ၊4လွှာ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ လသာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Eye Star မျက်စိစမ်းသပ်ခန်း
အမှတ် 99၊ ဈေးကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Family Doctor Polyclinic
09 447164575 09 954405404
"no.SA-9, Aung Zay Ya Complez, Thit Taw Ward Ahlone Tsp.", Yangon, Myanmar
Grand Hantha International Hospital(ဂရန်းဟန်သာဆေးရုံ)
01 523 000, 01-523000, 01-523111, 09-5202283, 09-5202284
3, Nar Nat Taw Rd., Corner of Kyee Myin Daing Kannar Rd,, Kamayut
Green Life အထွေထွေရောဂါနှင့် အရိုးအကြောအထူးကုဆေးခန်း
အမှတ် S/8၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ယာ၊ ပန်းလှိုင်လမ်း၊ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Int’l Marine Centre Medical
အမွတ္ 17/1၊ ကၽြန္းေတာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
အမွတ္ 37၊ အင္းလ်ားလိပ္ဟိုတယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
99, 2nd Flr., 28th St., Middle Blk., Pabedan Township Yangon
KAN THAR (1) (ကံသာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း)
Open hours : 3:00 PM TO 8:00 PM
50, G/F, 4th St., Lanmadaw Township Yangon
Kan Thar Yar International Specialist Hospital (ကန်သာယာဆေးရုံ)
01-505284, 09-30533333, 09-340125110
87, Pyay Rd., 6½ Mile,, Hlaing
01-540661, 01-549167, 09-448026197, 09-795899634
No.439-441 New University Avenue Road,Bahan Township 11182 Yangon, Yangon, Myanmar
Lan San ( လန်းဆန်းသွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါကုဆေးခန်း)
370, Nwe Ni 6th St., North Okkalapa Township. Yangon
661, 1st Flr., Cor. of Maha Bandoola Rd. & Latha St., Latha Township Yangon
Mascots Hospitals [Private]
01-218369, 09-43099993, 09-977199991
36/B, Manaw Hari Street,, Dagon
Mascots Laboratory Scientific & Industrial Co.,Ltd.
အမွတ္ 33/B၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
327, Shwe Bon Thar St., Pabedan Township
Mother’s Care အကြော၊ အဆစ်အထူးကုဆေးခန်း
01-394 957, 09-730 58348
အမှတ် 33၊ 89 လမ်း၊ ကန်တော်ကလေး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
09-443224606 ၊ 09-456881069
အမှတ်(SH-B5/5)၊ မလိခအိမ်ယာ ၊ ရတနာလမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ (သုံးပန်လှ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့)
အမှတ်(၁၆၉/က)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၆/၁၀ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
အမှတ်(၁၂၀၈/ခ)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
အမှတ်(၂၂)၊ အောင်မင်္ဂလာ(၂)လမ်း၊ မြို့မမြောက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
Myat Mon Medical center
09 441113004၊ 09 441113005
Lanmadaw Latha, Yangon, Myanmar
Myat Mon Yadanar
Mingalar Taung Nyunt, Yangon, Myanmar
Myin Tha Specaialist Clinic
09 777900890 09 400700601 09 400700602
South Okklapa Thingyankyun
N Health Myanmar Office
01-202120, 01-299797, 09-73200200
အမွတ္ 177၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း (လယ္)၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Nady Ayar Specialist Hospital
no.915, Lay Daung Kan Road, Nga Moe Yeik Ward Thingyan Kyun Tsp., Yangon, Myanmar
Nature’s Glory Wellness Centre
အမွတ္ 9/11 ၊ ေဇယ်၀တီလမ္း၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေျမညီထပ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Neo Vision မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းး
အမှတ် 141/149၊ ဗားကရာကွန်ဒို၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
09 506 1365
No.13, Ground Floor, Chan Thar Street ( Near Kyun Taw Rd ) Sanchaung, Yangon, Burma
+951 656172, +951 656173, +951 656174, +951 656175
အမှတ် 137-D၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
09 430 66666,01-377878, 01-376532, 09-43066666, 09-43966666
No. 24, 1-C, Nawarat Condo, Sa Mone St (Near National Theater & Myo Ma Kyaung Road), Dagon
09-420100178, 09-420010788, 09-420010789
No.16, Kyaikkasan Rd., Ponnar Gone Ward,(က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ ပုဏၰားကုန္းရပ္ကြက္၊)
Pun Hlaing Siloam Clinic
No. 238/240 , Bogyoke Aung San Road, Botahtaung Township,, Yangon, Myanmar
01-3684232,01-3684325,01- 3684336 01 3683015 01 3683060
Pun Hlaing Estate Avenue , Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar
အမွတ္ 36၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း(ေအာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။, အမွတ္ 380၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(ထက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
အခန္း 103၊ ပထမထပ္၊ ဓနလႈိင္တာ၀ါ၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Right Medical Centre ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးခန်း
09-263 150307ယ 09-263 150304
အခန်းအမှတ် 201-202-204၊ တိုက် A၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Sai Care Clinic (Maritime Co.,Ltd.) ဆေးစစ်ဌာန
အမှတ် 69၊ အခန်း 905၊ 9-လွှာ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းထောင့်၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
"Home lane Block, No.23 Shin Saw Pu Rd, Sanchaung Tsp, Yangon", Yangon, Myanmar
SES Health Care (ရွှေအိမ်စည်) အထူးကုဆေးခန်း
01-298140, 09-49285931, 09-36221241
အမှတ် 486၊ မြေညီ၊ သိမ်ဖြူလမ်းမကြီး၊ စာတိုက်မှတ်တိုင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
1-33/Thamainbayan Road/KyikasanStreet/Tahmwe Tsp, Yangon, Myanmar
Shwe Padauk Hospitals (ရွှေပိတောက်)
+95 945 4900064, +95 997 043699
+95 945 4900054
No(3), Ngarman Aung Pagoda Street, Ward(33), North Dagon, Yangon.
Shwe Poppa Specialist Clinic
Yankin Bahan, Yangon, Myanmar
Shwe Specialist Clinic
Tharkata, Yangon, Myanmar
SML အဆင့်မြင့်ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် အထူးကုဆေးခန်း
တိုက် 003/004၊ မြေညီထပ်၊ ဒဂုံတာဝါ၊ ရွှေဂံုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
09 972 617170
အမှတ်7၊ အရှေ့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 177၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ စာတိုက်မှတ်တိုင်အနီး၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Thae Grand Dental
Thiri Sandar Hospital သီရိစန္ဒာ ဆေးရုံ
130, Thaya Gone Street, Insein Yangon
Thu Kha Waddy Hospital
3rd Flr, C Shed, Nyaung Pin Lay Plaza,Lanmadaw, Myanmar, Yangon, Myanmar
UNITED VISION EYECARE CENTRE (ယူနိုက်တက်ဗွီးရှင်း)
No. 263, Shwe Bontha street (middle block), Pabedan township, Yangon.
Win Specialist Clinic
အမွတ္ 995/A၊ စည္ပင္လမ္း၊ 25 ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Yangon International Clinic အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်းး
01-211888 (ခြဲ-180), 09-8303255
အမှတ် 350၊ အခန်း 4၊ ပြည်လမ်းထောင့် Summit Parkview Hotel အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Yangon Medicare ဆေးခန်း
အမွတ္ 174၊ ဗိုလ္တေထာင္လမ္း (လယ္)၊ 53 လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊2ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
Your Clinic ဆေးခန်
အမှတ် 45/A၊ မြေညီထပ်၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ကံ့ကော်ဖူး (Polyclinic) ဆေးခန်း
အမှတ် 768၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊7ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 92/94၊ လှည်းတန်းလမ်း၊3ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အခန်း 2/B၊ ပထမထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
01-527 907, 09-506 0790
အမှတ် 507/A၊ ဒုတိယထပ်၊ ပြည်လမ်းနှင့် ပြည်ရိပ်သာလမ်းထိပ်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 202/208၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း (လယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ကျောက်တံတားသမဝါယမ မျက်စိစမ်းသပ်ခန်းနှင့် မျက်မှန်ဆိုင်
အမှတ် 274၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အခန်း 002၊ တိုက် 3၊ ကွမ်းခြံ2လမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊4ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 148၊ မြေညီထပ်၊ လမ်း 40 (အောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 48၊ ကျောင်းကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
: Sunday off
01-245014, 01-253528, 01-379483
အမှတ် 337၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
01-241 074, 01-383 609
အမှတ် 303၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 144၊ စမ်းချောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဓမ္မသုခလမ်းနှင့် မေဓါဝီလမ်းထောင့်၊ ဝေဘာဂီ 8 ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 25၊ 97 လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 52၊ သစ်တောလမ်း၊ စောရန်ပိုင်(တောင်)ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 43/B၊ ကျိုက္ကဆံဘုရားလမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အခန်း 8၊ သိင်္ဂီလမ်းနှင့်မေဓာဝီလမ်းထောင့်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုင်ခန်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, အမှတ် 255၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 3၊ တန်းမြင့်ကျောင်းလမ်း၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 485/B၊ ခေမာသီလမ်း၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အမှတ် 40/B၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ စံရိပ်ငြိမ်2လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
အခန်း 006၊ တိုက် 1၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ၊ 1 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။